“Hadii aan jeclaan lahaa tartanka waxaan si fudud kaga guuleysan lahaa Guardiola” – Jose Mourinho – Gool FM
“Hadii aan jeclaan lahaa tartanka waxaan si fudud kaga guuleysan lahaa Guardiola” – Jose Mourinho
(Yurub) 15 Maajo 2019. Macalinkii hore ee kooxo ay ka mid yihiin Chelsea, Inter, Real Madrid iyo Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ka hadlay, kaddib markii uu macalinka reer Spain ee Pep Guardiola dhawaan kaga sara maray tirada inta koobab uu ku soo guuleystay.
Tartanka u dhaxeeya labada macalin ee Pep Guardiola iyo Jose Mourinho ayaa ka mid ah shaqsiyaadka ku dagaalama kubadda cagta kuwooda ugu xiisaha badan caalamka kubadda cagta, wuxuuna loolanka ka dhexeeya kasoo bilaawday xilligii ay mas’uul ka ahaayeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
Dagaalka u dhexeeya labadan macalin ayaa markii dambe u soo wareegay horyaalka Premier League, laakiin Jose Mourinho ayaa ka tagay xilli ciyaareedkii hore kooxdii uu leylinayay ee Manchester United, kaddib markii looga ceyriyay natiijo xumi soo wajahday kooxda.
Yeelkeede, Jose Mourinho ayaa ku guuleystay 25 koobab inta uu ku jiray xirfadiisa tababarenimo, halka Guardiola uu ku soo guuleystay tiro koobab la mid ah, balse tababaraha reer Spain ayaa kaddib markii uu dhawaan kula guuleystay horyaalka Premier League kooxdiisa Manchester City wuxuu ka sara maray dhigiisa reer Portugal.
Hadaba Mourinho ayaa wareysi uu dhawaantan ku bixiyay wargeyska “L’Equipe” ee dalka France wuxuu ku sheegay:
“Mourinho 25 iyo Guardiola 26? Tani waxay i xusuusineysaa inaan halkan la joogo, 25 koobab”.
“Hadii aan sii joogi lahaa kooxaha Porto iyo Inter Milan, kaddib markii aan ku guuleystay tartanka Champions League, waxaan ciyaari lahaa UEFA Super Cup iyo FIFA Club World Cup, waxaana ku guuleysan karay xiligaan 31 koobab”.
Waxaa xusid mudan in Jose Mourinho dhawaan lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxda reer France ee Paris St Germain.